merolagani - ग्रामीण विकास बैंकको एफपीओ कति पर्न सक्छ ? हेर्नुहाेस् मेरोलगानी विश्लेषण
ग्रामीण विकास बैंकको एफपीओ कति पर्न सक्छ ? हेर्नुहाेस् मेरोलगानी विश्लेषण
Sep 17, 2017 merolagani
नेपाल ग्रामीण विकास बैंक (NGBBL) को एफपीओमा दुई लाख ५० हजार बढी आवेदकले दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर रकमको २ करोड ७० लाख कित्ता एफपिओ माग भएको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । निष्काशित धितोपत्रको तुलनामा २७.६९ गुणा धेरै कित्ता माग आवेदन भएको हाे ।
बैंकको सेयर विक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलका अनुसार २ वटा बैंकबाट संकलन भएको एफपिओको आवेदनको तथ्याङ्क समावेश गरिएको छैन । ती दुई बैंकबाट अन्तिम विवरण प्राप्त हुँदा आवेदकको संख्या अझ बढ्ने छ ।
ग्रामीण विकास बैंकले भदौ २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म एक सय रुपैयाँ अंकित दरका ९ लाख ७५ हजार कित्ता एफपिओ निष्काशन गरेको हो । अहिले प्राप्त भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार नै दुई लाख ५० हजार आवेदकले २ करोड ७० लाख कित्ता सेयर माग गरेका छन् । एफपिओमा ५० कित्तादेखि ४८७० कित्तासम्म आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले गत जेठदेखि लागू गरेको धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ अनुसार नै एफपिओ बाँडफाँड हुनेछ । यस आधारमा बाँडफाँड गर्दा कति कित्ता आवेदन गरे भन्दा पनि कति जना आवेदकले एफपिओ माग गरे भन्ने कुराले महत्व पाउँछ । अधिकतम कित्ता माग गर्ने आवेदक र ५० कित्ता माग गर्ने अावेदकले पाउने भनेको गाेला प्रथाबाट १० कित्ता नै हो । एफपिओ अत्याधिक माग भएपछि १० कित्ता सेयर पनि गाेला प्रथाबाट वितरण हुने भएकाे हाे ।
प्रत्येक आवेदकलाई १० कित्ता बाँडफाँड हुने नयाँ निर्देशिका अनुसार बाँडफाँड गर्दा ९७ हजार पाँच सय जना आवेदकले पनि गोलाप्रथाबाट मात्रै १० कित्ता एफपिओ हात पार्नेछन् । प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार हेर्ने हो भने पनि एक लाख ५२ हजार पाँच सय जना आवेदकको हात रित्तो हुने देखिन्छ ।
यस आधारमा एफपिओमा आवेदन गरेका साढे २ जना (२.५६४) मध्ये एक जनाले मात्र एफपिओ प्राप्त गर्ने देखिन्छ । अन्तिम तथ्याङ्क आएपछि बढेको आवेदक संख्या अनुसार एफपिओ पर्ने सम्भावना अझ कम हुनेछ र आवेदकले एफीओका लागि भाग्यमै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्वावलम्बन लघुवित्तलाई एफपिओ निष्काशनमा राष्ट्र बैंकको अंकुश, शेयर अनुपात परिवर्तनमा पनि रोक
स्वावलम्बन लघुवित्तले साढे १० करोडको एफपिओ जारी गर्ने
नेपाल बैंकको एफपिओका लगानीकर्तालाई धारमा राखेर सुरु भयो बोर्ड र मर्चेण्ट बैंकरको दोहोरी
एफपिओ निष्काशन गर्ने ओरियन्टल होटल्सको प्रस्ताव
व्यवस्था फेरिए पनि फेरिएन लगानीकर्ताकाे सेयरमा आवेदन गर्ने प्रवृत्ति
सिटिजन्सको एफपिओ तपार्इलाई पर्यो कि परेन ? मेरोलगानीमा हेर्नुहोस् नतिजा